Ozi Ọma Matiu Dere 18:1-35
Onye kacha n’Alaeze eluigwe (1-6)
Ndị na-eme ka ndị ọzọ dapụ n’okwukwe (7-11)
Ihe atụ gbasara atụrụ kpafuru akpafu (12-14)
Otú mmadụ ga-esi rite nwanna ya n’uru (15-20)
Ihe atụ gbasara ohu na-agbagharaghị ohu ibe ya (21-35)
18 N’oge ahụ, ndị na-eso ụzọ Jizọs bịakwutere ya, sị ya: “Ònye n’eziokwu bụ onye kacha ukwuu n’Alaeze eluigwe?”+ 2 O wee kpọrọ otu nwatakịrị, gwa ya ka o guzo n’etiti ha. 3 O wee sị: “N’eziokwu, ana m asị unu, ọ bụrụ na unu agbanweghị dịrị ka ụmụntakịrị,+ o nweghị ihe ga-eme ka unu baa n’Alaeze eluigwe.+ 4 N’ihi ya, onye ọ bụla nke ga-eweda onwe ya ala dị ka nwatakịrị a bụ onye kacha n’Alaeze eluigwe.+ 5 Onye ọ bụla nke na-anabata nwatakịrị dị otú a n’aha m na-anabatakwa m. 6 Ma onye ọ bụla nke mere ka otu n’ime ndị a dị nta bụ́ ndị nwere okwukwe na m mehie, ọ ga-akara ya mma na e weere nkume e ji egwe nri nke jakị na-akwagharị konye ya n’olu ma tụba ya n’oké osimiri.+ 7 “Ndị na-eme ka ndị ọzọ dapụ n’okwukwe ga-ata ahụhụ. N’eziokwu, a ga-enwerịrị ụdị ndị a, ma ha ga-ata ahụhụ maka ime ka ndị ọzọ dapụ n’okwukwe. 8 N’ihi ya, ọ bụrụ na aka gị ma ọ bụ ụkwụ gị na-eme ka ị na-eme mmehie,* gbupụ ya tụfuo.+ Ọ kaara gị mma ibu nkwarụ ma ọ bụ inwe otu ụkwụ nweta ndụ kama inwe aka abụọ ma ọ bụ ụkwụ abụọ, a tụba gị n’ọkụ ebighị ebi.*+ 9 Ọ bụrụkwa na anya gị na-eme ka ị na-eme mmehie,* ghụpụ ya tụfuo. Ọ kaara gị mma ibu otu anya nweta ndụ kama inwe anya abụọ a tụba gị na Gehena* bụ́ ebe ọkụ na-ere.+ 10 Ya enwekwala ihe ga-eme ka unu ledaa otu n’ime ndị a dị nta anya, n’ihi na ana m asị unu na ndị mmụọ ozi ha nọ n’eluigwe na-anọ n’ihu Nna m nke bi n’eluigwe mgbe niile.+ 11 * —— 12 “Gịnị ka unu chere? Ọ bụrụ na otu nwoke nwere otu narị (100) atụrụ, ma otu n’ime ha akpafuo,+ ọ́ gaghị ahapụ iri itoolu na itoolu fọrọ afọ n’elu ugwu gaa chọwa nke ahụ kpafuru akpafu?+ 13 Ọ bụrụ na ọ chọta ya, n’eziokwu, ana m asị unu, ọ ga-aṅụrị ọṅụ n’ihi ya karịa otú ọ na-aṅụrị n’ihi iri itoolu na itoolu ahụ na-akpafughị akpafu. 14 Otú ahụ kwa ka ọ na-adịghị Nna m* nke bi n’eluigwe mma ka otu n’ime ndị a dị nta laa n’iyi.+ 15 “Ọ bụrụkwa na nwanna gị emejọọ gị, gaa mee ka ọ mara ebe o mejọrọ mgbe naanị gị na ya nọ.+ Ọ bụrụ na o gee gị ntị, i ritela nwanna gị n’uru.+ 16 Ma ọ bụrụ na o geghị ntị, kpọrọ otu onye ma ọ bụ mmadụ abụọ gaa, ka e si n’àmà* ndị akaebe abụọ ma ọ bụ atọ gbara mara na okwu ọ bụla bụ eziokwu.+ 17 Ọ bụrụ na o geghị ha ntị, gwa ọgbakọ. Ọ bụrụ na o geghịkwa ọgbakọ ntị, were ya ka onye mba ọzọ+ na onye ọnaụtụ.+ 18 “N’eziokwu, ana m asị unu, ihe ọ bụla unu kere agbụ n’ụwa bụ ihe e kere agbụ n’eluigwe, ihe ọ bụla unu tọpụkwara n’ụwa bụ ihe a tọpụrụ n’eluigwe. 19 N’eziokwu, ana m asịkwa unu, ọ bụrụ na mmadụ abụọ n’ime unu anọrọ n’ụwa kwekọrịta n’ihe ọ bụla dị mkpa ha chọrọ ịrịọ, Nna m nke bi n’eluigwe ga-emere ha ya.+ 20 N’ihi na ebe mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ zukọtara n’aha m,+ anọ m ebe ahụ.” 21 Pita wee bịa, sị ya: “Onyenwe anyị, ugboro ole ka nwanna m ga-emehie m, mụ agbaghara ya? Ọ̀ bụ ugboro asaa?” 22 Jizọs sịrị ya: “Mba, ọ bụghị ugboro asaa, kama, ugboro iri asaa na asaa.+ 23 “Ọ bụ ya mere na e nwere ike iji Alaeze eluigwe tụnyere otu eze, nke chọrọ ka ya na ndị ohu ya mee mpịazi. 24 Mgbe ha na ya malitere ime mpịazi, a kpọbatara otu nwoke ji ya puku mkpụrụ ego talent iri (10,000).* 25 Ma ebe ọ bụ na o nweghị otú ọ ga-esi akwụ ya, nna ya ukwu nyere iwu ka e ree ya na nwunye ya na ụmụ ya na ihe niile o nwere ka e wee kwụọ ụgwọ ahụ.+ 26 N’ihi ya, ohu ahụ dara n’ala kpọọrọ ya isiala, sị, ‘Nweere m ndidi, m ga-akwụ gị ụgwọ niile m ji gị.’ 27 Nna ukwu nke ohu ahụ wee metere ya ebere, hapụ ya ma kagbuo ụgwọ o ji ya.+ 28 Ma ohu ahụ pụrụ wee hụ otu n’ime ndị ohu ibe ya ji ya otu narị (100) mkpụrụ ego dinarịọs,* nwụchie ya, tọgidekwa ya n’akpịrị, sị, ‘Kwụọ m ụgwọ niile i ji m.’ 29 N’ihi ya, ohu ibe ya dara n’ala malite ịrịọ ya, sị, ‘Nweere m ndidi. M ga-akwụ gị ya.’ 30 Ma o kweghị, kama ọ pụrụ wee mee ka a tụba ya n’ụlọ mkpọrọ ruo mgbe ọ ga-akwụ ụgwọ o ji. 31 Mgbe ndị ohu ibe ya hụrụ ihe merenụ, o wutere ha nke ukwuu, ha agaa kọọrọ nna ha ukwu ihe niile merenụ. 32 Nna ya ukwu wee kpọọ ya, sị ya: ‘Ajọ ohu, mgbe ị rịọrọ m arịrịọ, m kagburu ụgwọ niile i ji m. 33 Ọ̀ bụ na gịnwa ekwesịghị imere ohu ibe gị ebere, otú ahụ m meere gị?’+ 34 Nna ya ukwu weziri iwe, nyefee ya n’aka ndị na-elekọta ụlọ mkpọrọ, ruo mgbe ọ ga-akwụ ụgwọ niile o ji. 35 Otú ahụ ka Nna m nke eluigwe ga-emesokwa unu+ ma ọ bụrụ na onye ọ bụla n’ime unu anaghị eji obi ya niile agbaghara nwanna ya.”+
^ O nwere ike ịbụ, “Nna unu.”
^ Mkpụrụ ego talent ọlaọcha 10,000 bụ dinarịọs 60,000,000. Gụọ B14.